MIP dia robot android tonga lafatra ho fanomezana Krismasy | Androidsis
Izahay dia mamakafaka ny MiP, ilay robot android izay azonao fehezina amin'ny fitaovanao Android
Ny MiP dia robot android izay azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fitaovana finday, na iOS na Android. ny kilalao ho an'ny kely indrindra amin'ny trano sy ho an'ireo izay tsy dia be loatra, satria mamela anao hanana fotoana tsara amin'ny fifehezana robot iray izay azontsika tanterahina na hamela anay hihantona manodidina ny trano amin'ny hafainganana ihany izy ireo.
Ho an'ireo mpanjaka ireo dia mety ho fanomezana mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay manana ny filan'ity karazana kilalao ity ary, amin'ny ankapobeny, ho an'ny haitao. Azonao atao ny misintona fampiharana ho an'ny iOS sy Android hifehezana azy na miady amin'ny MiP hafa amin'ny lalao sasany aza, na maninona no tsy atao fanamby iray hafa amin'ny duel mba hahitana hoe iza no afaka mitazona zavatra betsaka kokoa amin'ny lovia ananany ho fanampiny fanampiny. Izahay dia mamakafaka azy amin'ny Androidsis hijery izay manome raha ity robot mahafinaritra sy mahaliana ity.
1 Kilalao na oviana na taona
2 Mihantona manodidina ny trano fotsiny
Kilalao na oviana na taona
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra io, satria izy io olon-drehetra nofinofy hahafahana mifehy robot avy amin'ny finday ary iza koa no avela handeha amin'ny làlan-kalehany, na dia eny aza, tandremo sao tsy misy hantsana na akaiky tohatra mba tsy ho faty ilay robot malalantsika sy liana te hahafantatra.
MiP dia manana fampiharana hahazoana fidirana andian-dahatsoratra tena mahaliana. Manomboka amin'ny inona ny fanaraha-maso azy io toy ny hoe fiara voafehy lavitra ka afaka mitondra azy amin'ny làlana izay hoforonintsika amin'ny rantsan-tanantsika manokana eo amin'ny efijery finday na tablette. Ny endrika fifampiraharahana hafa dia amin'ny alàlan'ny kalesy na vitamina misy angovo, izay fitambarana toetra mampihetsi-po izay adika amin'ny teny MiP, manomboka amin'ny alahelo, fifaliana na fandihizana, hatramin'ny fanaovana zavatra vetaveta.
Ho afaka mihitsy aza ny MiP hira fandihizana avy any iTunes ka hatramin'ny paompy mifantina ilay hira tadiavinao, mba milalao ady totohondry mihitsy na manohitra MIP hafa hahitana hoe iza no farany mijoro.
Mihantona manodidina ny trano fotsiny
Ity robot ity Izy io dia manana maodely 6 an-tanana ankoatr'izay fehezin'ny fampiharana. Iray ho an'ny dihy iray ihany, iray hafa handehanana irery na fanarahana mihitsy aza mba hahafahana mitantana azy io araka ny ahitanao ny horonantsary izay nataonay ho an'ny fotoana.
Fifandanjana tanteraka: rafitra manokana ho an'ny fitoniana miavaka na dia zavatra fitaterana aza
Teknolojia fahatsapana fihetsika: mamaly ny fihetsiky ny tanana na ny zavatra iray
Toetra manokana: tiany ny miala voly ary tiany ianao hanao izany koa
Mifandray tanteraka: araraoty ny fahafinaretan'ny MiP rehetra amin'ny fampiharana anao
MiP dia manana fitaovana Fifandraisana BLE (Bluetooth Low Energy) ary afaka mifandray tsy misy tariby amin'ny fitaovana iOS sy Android.
MiP vs MiP- Raha manana namana manana MiP hafa ianao dia avo roa heny ny fahafinaretana amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay app hampidirana azy ireo amin'ny ady na boaty infrared.
6 modes: Fetsy (mena) ho anao hianaranao hetsika 50 hatramin'ny tananao; fitsangantsanganana (mavo) hijerena ny tontolo manodidina anao; mandihy (turquoise) mandihy; araho (voasary) hanenjika ny tananao; mahazatra (manga) mandroso na mihodina ary mametaka (mavokely) hametrahana zavatra eo amin'ny lovia MiP
Ny robot dia mandeha amin'ny bateria AAA 4 ary mety ho mampifandray fampiasa ho toy ny lovia hitondrana zavatra aza raha tsy nariany izy ireo ary tsy manana olana amin'ny fitondrana azy ireo koa izy, satria ny fahaizana mijoro dia mahagaga. Ao amin'ny horonantsary dia ahitanao ny fomba fanaony maneuver sasany noho ny iray hafa raha mandihy izy indraindray toa lavo izy.
Raha fintinina, dia robot mahaliana izay afaka mividy amin'ny € 99,90 ianao Ary avy any Juguetronica no anananao ka mahatratra ny tranonao amin'ny alàlan'ny paositra izany na tsia, azonao atao ny mamakivaky ilay magazay ary mividy azy. Ny fanomezana tonga lafatra ho an'ity Noely ity.
Developer: WowWee Group Ltd.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny MiP, ilay robot android izay azonao fehezina amin'ny fitaovanao Android
Fitsapana hafainganam-pandeha: Nexus 6 VS LG G2
Ny ZTE Q7 dia mamaky ny Tenna